Mosquitto: သင်သိလိုသမျှ | အခမဲ့ဟာ့ဒ်ဝဲ
ဣဇာက်သည် | 12/04/2022 09:00 | အဆင့်မြှင့်တင် 25/02/2022 16:36 | ယေဘုယျ
မင်းသေချာသိလား။ ခြင်ဆိုတာဘာလဲအဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် သင်သည် အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို သိရှိလိုခြင်း သို့မဟုတ် ၎င်းကို သင်၏လည်ပတ်မှုစနစ်တွင် မည်သို့ထည့်သွင်းနိုင်သည်ကို သိလိုသောကြောင့် ဤဆောင်းပါးကို သင်ရောက်လာရခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဒီ open source ပရောဂျက်က ဘာအတွက်လဲ၊ ဘာအတွက်လဲ၊ အဲဒါက မင်းကို ဘယ်လိုကူညီနိုင်တယ်ဆိုတာ မသိရင် သင်၏ IoT ပရောဂျက်များနှင့် အဘယ်နည်း MQTT protocol ကို ဒီဆော့ဖ်ဝဲလ်ကို ဘယ်သူသုံးလဲ။
1 MQTT ဆိုတာဘာလဲ။
3 သင်၏လည်ပတ်မှုစနစ်တွင် Mosquitto ကိုမည်သို့တပ်ဆင်ရမည်နည်း။
ခြင်ဆေးခွေပေါ်မှာ အခြေခံတယ်။ MQTT ပရိုတိုကောMessage Queuing Telemetry Transport ၏ အတိုကောက်ဖြစ်သည်။ "အလင်း" စာတိုပေးပို့ခြင်းအတွက် ကွန်ရက်ပရိုတိုကော၊ ဆိုလိုသည်မှာ ယုံကြည်စိတ်ချရမှု မရှိသော သို့မဟုတ် လှိုင်းဘန်းဝဒ်ဆိုင်ရာ အရင်းအမြစ်များ အကန့်အသတ်ရှိသော ကွန်ရက်များအတွက် ဖြစ်သည်။ စက်မှစက် (M2M) ဆက်သွယ်ရေး၊ သို့မဟုတ် Internet of Things (IoT) ချိတ်ဆက်မှုများတွင် ယေဘူယျအားဖြင့် ၎င်းကို အသုံးပြုနိုင်သည်။
MQTT ကို ဖန်တီးခဲ့သည်။ ဒေါက်တာ Andy Stanford-Clark နှင့် Arlen Nipper ၁၉၉၉ ခုနှစ်တွင်၊ ၎င်းကို အဝေးထိန်းဆာဗာများထံ ပေးပို့သော ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့လုပ်ငန်းတွင် ဒေတာစောင့်ကြည့်ရန်အတွက် တယ်လီမီတာအတွက် ကနဦးအသုံးပြုခဲ့သည်။ အဆိုပါပလပ်ဖောင်းများတွင်၊ အလွန်တည်ငြိမ်သောချိတ်ဆက်မှုတစ်ခု သို့မဟုတ် ပုံသေကေဘယ်တစ်ခုကိုချထားရန် မဖြစ်နိုင်သောကြောင့် ဤပရိုတိုကောသည် ကန့်သတ်ချက်များကိုဖြေရှင်းနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
နောက်ပိုင်းတွင်၊ MQTT သည် စံသတ်မှတ်ထားပြီး ဖွင့်ထားသောကြောင့် ယခုအခါ ၎င်းသည် စီမံခန့်ခွဲသည့် open source protocol တစ်ခုဖြစ်သည်။ MQTT.orgနှင့် ဖြစ်လာသည်။ IoT အတွက် စံတစ်ခု.
MQTT သည် ၎င်းအပေါ်တွင် လုပ်ဆောင်ရန် TCP/IP ကို ​​အသုံးပြု၍ topology ကဲ့သို့ လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ တွန်းပါ/စာရင်းသွင်းပါ။. ဤစနစ်များတွင် တစ်ခုနှင့်တစ်ခု ခွဲခြားနိုင်သည်-
လိုင်း: ၎င်းတို့သည် တစ်ခုနှင့်တစ်ခု တိုက်ရိုက်မဆက်သွယ်သော်လည်း ပွဲစားနှင့် ချိတ်ဆက်သည့် ချိတ်ဆက်ထားသော စက်ပစ္စည်းများဖြစ်သည်။ ကွန်ရက်ပေါ်ရှိ client တစ်ခုစီသည် ထုတ်ဝေသူ (အာရုံခံကိရိယာကဲ့သို့ ဒေတာပေးပို့ခြင်း)၊ စာရင်းသွင်းသူ (ဒေတာလက်ခံခြင်း) သို့မဟုတ် နှစ်မျိုးလုံး ဖြစ်နိုင်သည်။
ပှဲစား: ၎င်းသည် ဖောက်သည်များနှင့် ဆက်သွယ်ပေးသော ဆာဗာဖြစ်ပြီး၊ ဆက်သွယ်ရေးဒေတာသည် ထိုနေရာသို့ရောက်ရှိပြီး သင်ဆက်သွယ်လိုသော အခြားဖောက်သည်များထံ ပေးပို့သည်။ ပွဲစားတစ်ယောက်ရဲ့ ဥပမာတစ်ခုက Mosquitto ပါ။
ထို့အပြင်၊ ပရိုတိုကောသည် အဖြစ်အပျက်ကို မောင်းနှင်ထားသောကြောင့် အချိန်အပိုင်းအခြားအလိုက် သို့မဟုတ် ဆက်တိုက်ဒေတာထုတ်လွှင့်ခြင်း မရှိပါ။ ဖောက်သည်တစ်ဦး အချက်အလက်များ ပေးပို့သည့်အခါမှသာ ကွန်ရက်သည် အလုပ်များလိမ့်မည်ဖြစ်ပြီး၊ ပွဲစားသည် ဒေတာအသစ်ရောက်ရှိလာသည့်အခါ စာရင်းသွင်းသူများထံ အချက်အလက်များသာ ပေးပို့ပါသည်။ ဒီလိုနည်းနဲ့ သိမ်းထားလိုက်ပါ။ အသုံးပြုထားသော bandwidth ပမာဏ အနည်းဆုံး.
နေကြတ်ခြင် ၎င်းသည် EPL/EDL လက်အောက်ရှိ လိုင်စင်ရ အခမဲ့ဖြစ်ပြီး ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ်ဆော့ဖ်ဝဲဖြစ်ပြီး MQTT ပရိုတိုကောမှတစ်ဆင့် မက်ဆေ့ချ်များ၏ ပွဲစား သို့မဟုတ် ကြားခံအဖြစ် လုပ်ဆောင်သည်။ ဤဆော့ဖ်ဝဲလ်သည် အလွန်ပေါ့ပါးသည်၊၊ PC တစ်ခုမှသည် ပါဝါနိမ့်မြှုပ်ထည့်ထားသောပြားများအထိ မတူညီသောစက်ပစ္စည်းများစွာအတွက် သင့်လျော်သည်။
Paho သည် ဘာသာစကားပေါင်းစုံ MQTT ဖောက်သည်စာကြည့်တိုက်များကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်သည့် Mosquitto အား ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည့် ဆက်စပ်ပရောဂျက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ Streamsheets သည် လုပ်ငန်းစဉ်ထိန်းချုပ်မှု၊ ဒက်ရှ်ဘုတ်များဖန်တီးခြင်း စသည်တို့အတွက် စာရင်းဇယားများနှင့် အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ ကြားခံဆောင်ရွက်ပေးသည့် ပရောဂျက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
နောက်ပြီး Mosquitto ကိုလည်း ပေးထားတယ်။ C စာကြည့်တိုက် MQTT clients များအပြင် နာမည်ကြီး mosquitto_pub နှင့် mosquitto_dub command line client များပါ၀င်သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ ၎င်းသည်အလွန်ရိုးရှင်းသည်၊ မိနစ်အနည်းငယ်အတွင်းတွင်သင်ကိုယ်ပိုင်အလုပ်လုပ်နေနိုင်သည်၊ သင့်တွင်စမ်းသပ်မှုဆာဗာတစ်ခုပင်ရှိသည်၊ test.mosquitto.orgဖောက်သည်များကို နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးဖြင့် စမ်းသပ်ရန် (TLS၊ WebSockets၊ …)။
ပြဿနာတစ်ခုရှိလျှင် ခြင်ဆေးခွေတစ်ခုရှိသည်။ ကောင်းတဲ့အသိုင်းအဝိုင်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် ဖိုရမ်များနှင့် အခြားနေရာများတွင် သင့်အား ကူညီလိုသော ဆန္ဒရှိသည်။
သင်၏လည်ပတ်မှုစနစ်တွင် Mosquitto ကိုမည်သို့တပ်ဆင်ရမည်နည်း။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ သင်ဘယ်လိုလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုလည်း ရှင်းပြရပါမယ်။ Mosquitto ကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီး သင်၏လည်ပတ်မှုစနစ်တွင် ထည့်သွင်းပါ။ထို့ကြောင့် သင်၏ IoT ပရောဂျက်များဖြင့် ၎င်းကို စတင်စမ်းသပ်နိုင်ပါသည်။ သင်သည် နည်းလမ်းများစွာဖြင့် ပြုလုပ်နိုင်သည်-
ယင်းကိုအသုံးပြုဖို့ အရင်းအမြစ်ကုဒ် y ကိုယ်တိုင်လုပ်ပါ။.
Binaries: သင်လုပ်နိုင်သည် ဒေါင်းလုဒ်ဧရိယာမှဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါ။.
Windows ကို: သင့်တွင်ရှိသော စနစ်ပေါ်မူတည်၍ 64-bit သို့မဟုတ် 32-bit ဗားရှင်းတွင် .exe binary ကို ထားခဲ့သည့် လင့်ခ်မှ ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါ။ ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲပြီးသည်နှင့်သင် run နိုင်သည်။ သင့်တွင် ပြဿနာများရှိပါက README-windows.md ဖိုင်ကို သင်ဖတ်နိုင်ပါသည်။
MacOS: ဒေါင်းလုဒ်လင့်ခ်မှ ဒွိစုံကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါ၊ ထို့နောက် Mosquitto ထည့်သွင်းရန် brew.sh script ကို အသုံးပြုပါ။
GNU / Linux များ: ၎င်းကို ထည့်သွင်းရန် နည်းလမ်းများစွာ ရှိသည်၊ ဥပမာ-
snap run command ဖြင့် Ubuntu နှင့် အခြားသော distro များ: snap install ခြင်
debian: sudo apt-add-repository ppa:mosquitto-dev/mosquitto-paa & sudo apt-get update & sudo apt-get ထည့်သွင်းခြင်
ပိုပြီး: အခြား distro များအတွက် နှင့် Raspberri Pi အတွက် တရားဝင် သိုလှောင်မှု မှလည်း ရနိုင်ပါသည်။
အခြားသူများကို: နောက်ထပ် အချက်အလက်ကို ကြည့်ပါ။ ဒီဝဘ် Mosquitto binaries ၏
၎င်းပြီးနောက်၊ သင့်တွင် Mosquitto ကို သင်၏လည်ပတ်မှုစနစ်တွင် ထည့်သွင်းပြီးဖြစ်သည်။ အဆင်သင့်ဖြစ်လိမ့်မည်။ သင်လိုအပ်သလို အသုံးပြုရန် သို့မဟုတ် စီမံခန့်ခွဲရန် Celado နှင့်.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အခမဲ့ဟာ့ဒ်ဝဲ » ယေဘုယျ » ခြင်- မင်းသိလိုသမျှ